Shina: Rahonan’ny sivana aterineto Amerikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jolay 2019 14:06 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, русский, bahasa Indonesia, Français, Español, বাংলা, Swahili, English
(Marihana fa efa tamin'ny taona 2016 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Niaro ny fanapahan-kevitra ny SourceForge tamin'ny filazana fa izy ireo ihany no manaraka ny lalàna Amerikana. Izay somary mitovitovy amin'ny nambaran'ny mpitondra tenin'ny governemanta Shinoa raha nanontaniana momba ny sivana amin'ny aterineto ao amin'ny fireneny.
Efa nosakanan'i Shina ny SourceForge teo aloha. Nahatonga ireo Shinoa sasany mpamorona kaody (codeur) hanontany tena ny fandrenesana ity filazan'ny Great Firewall (Aroafo lehibe) vaovao Amerikana ity raha mety ho voasakana izy avy any amin'ny ilany ary inona no mety ho azo atao manoloana izany.
Sary avy amin'ny bilaogy Moonlight an'i William Lone.
Tao amin'ny CNBeta tamin'ny andro nipoahan'ny vaovao, ugmbbc nanoratra hoe:
Voahitsakitsaka ankehitriny ny kolontsaina tovozona malalaka. Rehefa notakiana mba hanakana ireo firenena jiolahimboto, hanohitra any amin'ny Kongresy Amerikana ve ny SourceForge?
Toe-javatra sarotra tokoa, saingy tsy maintsy ny firenena iray manontolo ve no voasazy noho ny fihetsika tafahoatra ataon'ny olona vitsy an'isa any amin'ireo firenena ireo? Manome foto-drafitrasa goavana ho an'ireo firenena nampijaliana sy an-dalam-pampandrosoana ny rindrambaiko tovozona malalaka. Manantena aho fa afaka mahita ny fiantraikan'izany amin'ny fotodrafitrasa sy ny indostria vao misandratra ao amin'ireo firenena ireo ny governemanta Amerikana.
Tao amin'ny fiarahamonina mpiondana aterineto Solidot, manamarika ny free-as-in-freedom fa manaraka ireo famerana tany am-boalohany napetraka ho an'ireo mpiserasera avy amin'ireo firenena dimy ity fanapahan-kevitry ny SourceForge ity, izay mamela ny mpiserasera hijery ny tranonkala ary hitroka fitaovana kaody, kanefa manakana azy ireo tsy handray anjara. Hoy koa ny fanehoan-kevitra momba izany :
Tokony hanaraka ny lalàna Amerikana ny SourceForge!
Nahoana no tsy maintsy manaraka ny kolontsaina tovozona malalaka ny SourceForge? Kaody fotsiny ihany ny rindrambaiko, izay mahatonga azy ho malalaka sy tsy miandany, saingy tsy afa-miala amin'ny lohamilina izay mampiantrano azy ireo ny tranonkala, ary tsy maintsy manaraka ny lalàna ao amin'ny firenena izay misy ny lohamilina ianao, izay no fandehany.
Fahalalahan'izy ireo izany.
erlv ao amin'ny bilaoginy ara-teknika LingCC mijery ny fiantrakan'ny politika midikiditra amin'ny hetsika tovozona malalaka
Tsy misy olona mpankafy teknolojia na manohana ny loharanom-baovao tovozona malalaka ka maniry hahita izany ho lasa fitaovana ara-politika, saingy tontolo fehezin'ny politika izany; afaka milaza izay tianao momba ny fitsipika, fahalalahana na loharano tovozona malalaka ianao, saingy rehefa eo ambanin'ny fifehezan'ny governemanta ianao, dia izy no mametraka fepetra, ka mihaino tsara ianao: fitaovana fotsiny ireo.
Tsy milaza aho fa tsara ho an'ny firenena na ny vahoaka ny GFW (Aroafo Lehibe), fa mila manao dingana sasantsasany kosa isika mba hiantohana mandritra izany fotoana izany fa afaka mifandray malalaka amin'ireo any ampitan-dranomasina isika, afaka mijanona tsy miankina amin'izy ireo isika . Amin'izao fotoana izao, any amin'ny tanibe, ohatra, faly ireo mpankafy loharano tovozona malalaka mandray anjara amin'ny kaodiny miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina tovozona malalaka iray manontolo. Saingy rehefa lasa fitaovana ara-politika izany, ahoana no tokony hahazoantsika ireo zo izay antsika?
Tsy mino aho fa manana lohamilina fitaratra any Shina ny SourceForge. Raha tena te-handamina ho tombontsoan'ny indostrian'ny fampahalalam-baovao ao amin'ny firenena ireo tompon'andraikitra amin'izany ary vonona ny hanao izay tokony atao, dia tsy hampalahelo azy ireo ny maka ny 1% amin'ny vola laniny amin'ny GFW (Manda aroafo lehibe), toy ny fanohanana madio avy amin'ny governemanta , ary mametraka lohamilina fitaratra vitsivitsy ao anatin'ny firenena. Amin'izany farafaharatsiny, mbola manana ny kaodintsika manokana hatrany isika. Farafaharatsiny koa, mbola manana ny fahaleovantentsika manokana isika!
20 ora izayEl Salvador